F-6018T Dhuumaha goynta Laser Machine - Shiinaha Dongguan Glorystar Laser
Waayo, Features Product goynta tube Qaab duwan ● laga keeno sax sare gudbinta fur kubada, toosan tilmaan-tareenka ● nidaamka wadista baabuurta Howlsocodsiinta sax sare laga keeno, laga keeno gear helical. ● Kala goynta tube qalab ● xawaaraha goynta Fast, oolnimada sare, ammaan ah, qaab deggan warshadaha Khusayso aad loogu isticmaalay dhammaan noocyada kala duwan ee warshadaha alaabta birta ah sida processing tuubooyin bir ah, cookware iyo qalabka musqusha, advertising & calaamado, nalalka iyo hardware, cabi korontada. ..
Waayo duwan goynta tube Qaab
● laga keeno sax sare gudbinta fur kubada, sax sare toosan tilmaan-tareenka
● nidaamka motor driving Howlsocodsiinta laga keeno, laga keeno gear helical.
● qalab goynta tube Separate
● xawaaraha goynta Fast, oolnimada sare, ammaan ah, qaab deggan
Si weyn loo isticmaalay dhammaan noocyada kala duwan ee warshadaha alaabta birta ah sida processing tuubooyin bir ah, cookware iyo qalabka musqusha, advertising & calaamado, nalalka iyo hardware, armaajooyinka korontada, qaybo auto, mashiinada iyo qalabka, qalabka qoyska, elavator iyo sax qaybo processing, iyo wixii la mid ah .
Inta badan codsatay in dhammaan noocyada kala duwan ee qalabka sheet bir aan xiriir goynta degdeg ah, xardho. iyo feer, sida steel khafiif ah, ahama, waxaaga, steel manganese, galvanized, aluminium, copper iyo biraha processing biibiile, iwm
awood laser 1000W TO 10000W (Ikhtiyaar)
isticmaalka awoodda Guud <20KW
mode gudbinta Ball Ku marooji Gudbinta
danab Working 380V 50Hz (60Hz)
Previous: Sudee-3015G / Sudee-4020G Fiber Laser mashiinka Goynta la tuubooyinka jarida
Next: Double Station Laser Alxanka Machine
1325 Lazer magaabay wiil
2 Madaxda laser magaabay wiil Machine
20w Fiber Laser Calaamadaynta Machine
20w Mopa Fiber laser Calaamadaynta Machine
3015 Fiber Laser Goynta Machine
4020 laser Machine Jarida
Ads laser Goynta Machine
Arcylic laser Goynta Price Machine
Jarida Blm tuuboyinka Chinese Machine
maro Machines goynta
CNC Fiber laser Jarida Machine
CNC birta laser Machine
CNC tuuboyinka laser Goynta Machine
Fiber Goo Machine
Fiber laser 2000 Watt Jarida Machine
Fiber laser magaabay wiil Price
Fiber laser Jarida Machine
Fiber Laser Birta magaabay wiil
Fiber laser birta goynta Machine
Fiber laser Alxanka Machine
Fiber birta laser Goynta Machine
Tube Glass laser magaabay wiil Machine
laser Machines Goynta
Machine laser Waayo, tuuboyinka
Lazer Goynta Machines looxa
Tube birta Fiber laser Goynta Machine
tuuboyinka Forces Goynta Machine
Full lifaaqan Exchangeable Worktable Sudee-6015CE
Sudee-3015CE / Sudee-6020CE Full xiran iyo Exchange ta ...